Mexbuuba Mufti oo laga siidaayay xabsi ay ku jirtay 14 bilood | Gaaroodi News
Mexbuuba Mufti oo laga siidaayay xabsi ay ku jirtay 14 bilood
Madixii maamulkii hore ee Kashmiir ee ay India maamusho ayaa xabsiga laga siidaayay kaddib muddo ka badan sanad oo ay u xirnayd dowladda dhexe ee India.
Mexbuuba Mufti ayaa la xiray horraantii bishii Agosto ee sanadkii hore, xilligaasi oo ah markii dowladda India ay gobolka Kashmiir kala noqotay ismaamulkii.
Muddo laba sano ah ayay ahayd in haweeneydani xabsiga lagu sii hayo iayada oo aan maxkamd la hor keenin balse gabar ay dhashay ayaa racfaan ka qaadatay go’aankaasi oo dacwad ka dhan ah go’aankaasi geysay maxkamadda sare ee dalkaasi.
Gabadhaasi ayaa xalay qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka ee hooyadeed ku sheegtay in hadda la soo afjaray xariggii sharcidarrada ahaa ee hooyadeed lagula kacay, waxayna u mahadcelisay cid kastaa oo ka qeyb qaadatay in ay dib u hesho xorriyaddedda.
Dowladda dalkaasi India ayaa la rumeysan yahay in sanadkii la soo dhaafay ay xabsiga dhigtay kumannaan qof oo ay ku jiraan hawlwadeenno u dooda xaquuqul insaanka, siyaasiin iyo ganacsato kaddib markii ay awooddii ismaamulka ka qaaday gobolka Kashmiir.
Mufti oo cod soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa dowladda dalkaasi ugu baaqday in xabsiga laga sii daayo dhammaan maxaabiista kale xabsiyada ku jirta.
Waxay sidoo kale sheegtay in shacabka gobolkaasi aysan u dulqaadan doonin gefkii loo geystay shanti bishii Agoste ee sanadkii hore islama markaana ay sii wadi doonaan halgankooga.
Gobolkaasi Kashmiir ayaa in muddo ah lahaa ismaamul u gooni ah oo arrimaha qaar madax-bannaani u siinayay balse go’aanka ah in dowladda dhexe ee India ay awooddaasi laasho ayaa waxaa ka dhashay muran aad u badan iyo dibadbaxyo dhibaatooyin badan abuuray.
Dowladda dalkaasi ayaa kumannaan ka tirsan ciidamadeeda ku daabushay gobolkaasi, si ay uga hortagaan rabshadaha ka dhashay go’aankaasi, waxayna hawada ka saartay intarneedka iyo dhamaan isgaarsiinta kale.